Lo msebenzi, obuphenya ngobudlelwane bokulala kanye namazinga okushisa elulwane lase-Wahlberg (Epomophorus Wahlberg) usetshenziswe ohlelweni: Weird Ways Animals Sleep.
Lolucwaningo beluholwa nguSolwazi Colleen Downs, elekelelwa ngabafundi uNksz Adowa Awuh, uNksz Maryna Jordaan, uNksz Londiwe Magagula, uNksz Truth Mkhize, uNksz Christine Paine, uNksz Esmaella Raymond-Bourret kanye noNksz Lorinda Hart.
Uncwaningo luka Downs beluhlose ukubheka imiphumela yokunyuka kwamazinga okushisa ngenxa yokuguquka kwesimo sezulu ekulaleni kwalamalulwane.
uDowns nethimba lakhe bathole ukuthi ukunyuka kwamazinga okushisa kuba nomthelela ongemuhle ekuphumuleni kwalamalulwane njengoba ephoqeleka ukuchitha isikhathi esiningi zizikhotha uboya, ekululeni izimpiko Kanye nasekuzibhakuziseni ukuze ahlezi epholile. Kuthe uma amazinga okushisa edlula kwanga 35c asemini. Abacwaningi babike ukuthi awekho amalulwane, atholaka kakhulu ezindaweni eziseNingizimu neAfrika, abonakale elele.
Njengoba lamalulwane ekuthola kunzima ukupholisa imizimba yawo ngezinsuku lapho kushisa kakhulu, kuphinde kuveze ngokusobala ubunzima ahlangabezana nawo ngenxa yalamazinga okushisa. Esikhathini esisanda kudlula amalulwane ashona ngenxa yesifudumezi ezweni lase-India nase Australia.
Uhlelo lwe-BBC Earth belugxile ezimweni zokulala zamalulwane, ama-sea otter, izimfene zohlobo lwama-orangutan, izinyoni kanye namahlengethwa. Kugxilwe ekutheni amalulwane kumele ahlale eqaphile ngisho elele, ngoba odlezinye bangagasela engalindele, Uhlelo luphinde lwabalula uphenyo luka-Downs kanye nencazelo yesimo ‘sokulala ungalele’
Ngokwe BBC, lokhu kuziphatha ekulaleni kujwayelekile ezilwaneni zasemanzini kodwa uDowns nethimba lakhe libike ukuthi amalulwane ayi-Wahlberg’s Epauletted ayisilwane sokuqala esingesona esasemanzini okubonakala kuso loluhlobo lokuziphatha. Lolucwaningo ludalule amalulwane angamaphesenti angama-21% alala evule ihlo elilodwa, emboze ihlo lawo elivaliwe ngaphansi kwephiko.
Lokuziphatha kuveza uhlobo lokulala olubizwa nge-unihemispheric, okuwukulala kwengxenye yengqondo enye ibe isebenza ngokujwayelekile. Lendlela yokulala yenza ukuthi izilwane zihlale ziqaphile ukuzivikela ekubeni yizisulu zokudliwa odlezinye njengezinkawu nokhozi lwase-Afrika, khonamanjalo aphinde athole ukuphumula ngokulala.
Amalulwane okwakwenziwa ngawo ucwaningo anendawo yokuphumula ngaphandle kwesakhiwo i-John Bews ekhempasisni yaseMgundundlovu, amanye amalulwane okwenziwa ngawo ucwaningo ayegcinwe lapho kugcinwa khona izinyoni. uDowns ubike ukuthi ucwaningo lwalezi zilwane okubhekwa kuzo umthelela wokushintsha kwesimo senhlalo kanye nokushintsha kwamazinga okushisa, kuzonikezela ngolwazi ukuze ucwaningo olufana nalolu lwenziwe nakwezinye izilwane zaloluhlobo